အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by kai on Sep 13, 2013 in Editor's Notes, Myanma News | 30 comments
BURMA RELATED NEWS – SEPTEMBER 03-06, 2013
AP – Lawmakers uneasy over US-Myanmar military ties
Reuters – In the new Myanmar, an old junta’s laws survive and adapt
IANS – Chinese premier discuss ties with Myanmar president
IANS – Myanmar taekwando team training in South Korea
ANI – Myanmar to call back citizens working illegally in Malaysia
The Nation – Myanmar watchers expect jump in M&As next year
The Nation – Myanmar-Thailand expressway expansion planned
The Nation – Migrants to be granted access to healthcare
Asia News Network – Myanmar contributes 1% to Asean-China trading
Asia News Network – Hundreds of Myanmar workers arrested in M’sia
Asia News Network – Myanmar, S. Korea to build power plant
Denver Post – Myanmar sentences Muslim man to7years in prison
Forbes – What Myanmar Must Do To Free Itself Of China
ACN Newswire – Fuji Electric Establishes Myanmar Branch Office
Bloomberg – Myanmar’s 2015 Stock Exchange Deadline at Risk: Southeast Asia
Bernama – Myanmar President To Join China-Asean Expo In Nanning
Bernama – Myanmar Calls For Demarcation Of Myanmar-Thai Border
Asia Times Online – Myanmar, North Korea stay brothers in arms
Asia Times Online – Military roots of racism in Myanmar
Asia Times Online – Myanmar’s Shan see long path to peace
PRI Public Radio International – Shan refugees face uncertain road back to Myanmar
South China Morning Post – Obama’s plan to restore military ties with Myanmar ‘too soon’ for some US lawmakers
Xinhua – Myanmar sets to launch more foreign film festivals to boost cultural exchange
ANS – India contributes $1 mn to Myanmar
Eleven Myanmar – Myanmar Parliament speaker to attend Asian Inter-Parliamentary Assembly
International Business Times – Myanmar Property Taxes, Levied By The Government To Control Skyrocketing Real Estate Prices, Deemed Ineffective
Pattaya Mail – Myanmar’s parliamentary speaker visits PM Yingluck
The Irrawaddy – In The New Burma, Old Junta-era Laws Survive and Adapt
The Irrawaddy – Recalling Monk Beatings That Sparked the Saffron Revolution
The Irrawaddy – Burmese Economist Khin Maung Kyi Dies
Mizzima News – Myanmar, Japan to cooperate in wide range of areas
Mizzima News – China to train Myanmar MPs on environment assessment
Mizzima News – 4G network in SEA Games venues
BURMA RELATED NEWS – SEPTEMBER 07-10, 2013
Reuters – INSIGHT – With Japan’s help, an ex-soldier leads Yangon from backwater to megacity
AFP – Rent hikes push Myanmar’s poor into homelessness
UPI – Myanmar mulls national cease-fire
The Canadian Press – In Myanmar’s north,apersecuted minority dreams of Canadian-style federalism
The Nation – TV ‘most powerful tool for marketers’ in Myanmar
The Nation – Myanmar conglomerate looking to joint ventures with Thai investors
The Nation – BEC-Tero plans to build TV studios in Yangon
GOAL.com – Myanmar team manager accepts defeat against Malaysia
The New Zealand Herald – Myanmar receives high-tech TB detection machines
International Business Times – Myanmar’s Market Capitalization To Reach $15 Billion By 2020, But First It Must Launch Its Stock Exchange
Channel NewsAsia – Myanmar plans to pass new company law by end-2014
Channel NewsAsia – Rakhine conflict won’t affect Kyauk Phyu SEZ, says Myanmar govt
Asia News Network – Govt seeks to legalise Myanmar workers in M’sia
AsiaOne – Myanmar to draft law to court monitor media, groups
IANS – Myanmar Parliament speaker calls for more reforms
IANS – Myanmar’s adult literacy rate rises to 95.13 percent
Asia Times Online – China still has it wrong in Myanmar
PR Newswire – Duane Morris LLP Opens Office in Myanmar, Expanding Asian Presence
The Star Online – Intoxicating ‘tea leaf’ gang busted
The Star Online – Government to help Myanmar workers
UN News Centre – Myanmar: first UN aid convoy in 20 months reaches displaced in Kachin state
Wall Street Journal – PRESS RELEASE: Wastewater Purification Technology Represented by ADB International Group to be Utilized in Myanmar
Eleven Myanmar – Yangon’s circular railway service to be upgraded
Eleven Myanmar – President’s spokesperson makes no definite reply to rumour of President forming new political party
The Irrawaddy – Looking foraFew Good Cronies
The Irrawaddy – Buddhist Committee’s 969 Prohibitions Prompts Meeting of Movement Backers
The Irrawaddy – India Opens Export-Import Bank Office in Rangoon
Mizzima News – ABSDF to open liaison office in Karen state
Mizzima News – Parliament will back prevention of foreign fishing: Speaker
DVB News – Ethnic TV launches in Burma
1. China still has it wrong in Myanmar
2. Burma govt and KIO battle in southern Kachin state
3. Burma: What chance another coup?
4. Rent hikes push Myanmar’s poor into homelessness
5. In Bangladesh, UNHCR helps first refugee family to return to Myanmar
6. Myanmar’s Suu Kyi says worth getting wet for democracy
7. Myanmar coordinates with China for opening border gates to int’l visitors
တစ်ယောက်ယောက် ဘာသာပြန်ပေးပြီးသားကို အဆင်သင့် ဖတ်ရ ရင် ကောင်းမယ်
dictionary ကြီး ကိုင် ပြီး ဖတ်ရမှာ
သူကြီး…မန်ဘာသောင်းကျော်မှာ.လူတိုင်း… ဗြိတိသျှစာတတ်တယ်ထင်သလားဂျ….ပြောတော့..နောက်ကွယ်က စာဖတ်ပရိသတ်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုဂျာ…အဟီး …ဘာသာပြန်ပေး….ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲလုပ်မှရမှာလား…
စကားမစပ် ကေအိုင်အေ က စစ်ဗိုလ်လေးကို ဗိုက်ခွဲ၊ ခေါင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ သတင်း အမှန်လားဗျ။ အခုတော့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ တိုက်ပွဲ ဆင်နေကြပြီ။
ဒေါ်စု က ပိုလန်မှာ ပြောတာ ၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းမဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် ၊ သူ့ ချည်းပဲ မတတ်နိုင်ဘူး တဲ့
ဒါပေသည့် ၊ ဒေါ်စု တာဝန်ယူထားတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာကြီးကလဲ ၊ သူ့ ခဗျာ
ဘဏ် အကောင့်ထဲက ငွေတွေ ဘယ်သူ ပိုင်လဲတော့ မသိဘူးးး
မင်းတို့ ပြည်သူတွေကတော့ အကြွေးစာရင်းပိုင်တယ် ယူထားလိုက် တဲ့။ ကာတွန်းလေး ရင်နာနာနဲ့ သဘောကျလို့။
နောက်ဆုံး မနိုင်လို့ ဒီ ဖွတ်မွဲကျနေတဲ့နိုင်ငံကို လွှဲပေးလိုက်ရရင်တောင် အကြွေးဘရဘွကို ကြီးမေခေါင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်ချင်ပုံများလားလို့။
အဲဒီစိနသားတွေကို.. မြန်မာပြည်လာပြီး ဒေါ်လာ ၃သိန်းရင်းနှီးမြုတ်နှံရင်. ဂရင်းကဒ်(အမြဲနေထိုင်ခွင့်)ပေးမယ်ဆိုပြီး.. ဆွဲဆောင်စည်းရုံးသင့်တယ်ထင်မိတယ်…။
”သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်စုတစ်စုက သားသမီး တစ်ယောက်ပဲ လက်ခံတဲ့ အနေအထားမှာ ယောက်ျားလေးတွေပဲ များနေတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ လက်ထပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀ နီးပါးလောက် ကုန်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကနေ၀ယ်တဲ့ အနေအထားကို တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြီးအကဲတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး ပြုပြင်ဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းနေပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နှင်းရေး တပ်ဖွဲ့စုမှူး ရဲမှူးရိုလင်က ပြောကြားသည်။
မျိုးချစ်သကောင့်သားများ တရုတ်ကျ ကြောက်ကြလား မသိ။
ပြည်ကြီးတရုတ်မတွေကျ စလုံး လာလာပြီး အဖိုးကြီးတွေ ယူကြသဗျာ။
ပိုက်ဆံရ/ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရင် ကန်ထုတ်ကြရော။
“မိသားစုလုံခြုံရေးကို အာမခံမည်ဆိုလျှင် ဒီပဲရင်း အရေးအခင်းနှင့်ပတ်သတ်သမျှ အားလုံးဖွင့်ချမည်ဟု အငြိမ်းစာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ပြောကြား”
မိသားစု လုံခြုံရေးကို အာမခံမည်ဆိုလျှင် ဒီပဲရင်း အရေးအခင်းနှင့်ပတ်သတ်သမျှ အားလုံးဖွင့်ချမည်ဟု အနောက်နိုင်ငံ သံရုံးကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးနှင့် လျှို့ဝှက်တွေ့စုံ စဉ် အငြိမ်းစာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်မှပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ၊ စစ်တပ်မှ ဖိအားပေး အနားယူခိုင်းခံခဲ့ရသော အငြိမ်းစားအရာရှိများလည်း သူ့နည်းတူ တိုင်းပြည်သို့ ဝန်ခံဖွင့်ချမည့်သူ အများအပြားရှိကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားသည်ဟု သိရပါသည် ၊
“အားလုံးက ပြောချင်နေကြပြီလေ ၊ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ အထက်အမိန့်အရ လုပ်ခဲ့ကြတာလေ ၊ မှားတယ်မှန်တယ် လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူး ပြန်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိတာ ၊ ခိုင်းတာလည်းလုပ်ပြီးရော အဲဒါက ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် လုပ်ခဲ့သလိုလို နဲ့ အပြင်ကိုကောလဟာလလွှင့်တာခံရတယ် ၊ အဲဒါတွေက နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးလိုက်တာပဲ ၊ ကိုယ့်ကို သမိုင်းတရားခံဖြစ်အောင် ထိုးကျွေးလိုက်တာ ၊ ဒါ ဘယ်သူကမှ မခံနိုင်ဘူးလေ ၊ ကိုယ့်သားစဉ်မြေးဆက်အပေါ် မဟုတ်တဲ့ အမည်းစက်ကြီးဖြစ်နေမှာလေ ၊ အားလုံး ဖွင့်ချချင်နေကြတယ် ၊ တစ်ခုပဲရှိတယ် ၊ မိသားစုရဲ့ လုံခြုံရေးကို တိတိကျကျ အာမခံချက်ပေးရမယ်”
မည်သည့်စိုးရိမ်မှုများကြောင့် မိသားစုလုံခြုံရေးကို အာမခံချက်တောင်းရတာလဲ ဟု သ့ရုံးကိုယ်စားလှယ်မှမေးရာ ၅လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု အမှုမှန်မပေါ်မခြင်း အရင်အာဏာရှင်များ၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်မှုများရှိနေသည်ကို အထင်အရှားသိနိုင်ကြောင်း ၊ အချိန်မရွေး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်မှ ပြန်ဖြေခဲ့သည်ဟု သိရပါသည် ၊ သံရုံးကိုယ်စားလှယ်မှ တဆက်တည်းဖြေလို့ရလျှင် မေးစရာတစ်ခုရှိကြောင်း ၊ ဖြေလို့ရလျှင်ဖြေပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်မှ သဘောတူသဖြင့် အတွင်းရေးမှူး(၂) ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်၏ ပယောဂပါ မပါ သိလိုကြောင်းမေးကြားခဲ့သည် ၊
“အဲဒါကိုလည်း ဖြေချင်နေတာပါ ၊ ကိုယ့် ပယောဂ မပါပါဘူး ၊ လုံးဝကို မပါတာပါ ၊ ကိုယ်တို့ ဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ ၊ တခါတခါ သဘောထားတိုက်ဆိုင်တာရှိသလို ထိပ်တိုက်ပြောရတာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ ၊ အခုဟာက အပြင်မှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ကိုယ်က တရားခံလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေတယ် ၊ ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိတယ် ၊ အချိန်တန်ရင် ကိုယ်ဖွင့်ပြောမှာပါ ၊ ကိုယ်မသေခင် တာဝန်ကျေသွားချင်တယ် ”
မိသားစု ဘယ် ၂ ဆက် လုံခြုံချင်တာတုန်းးးး
ဒါမှ မဟုတ် ဘယ် ၂ ယောက်တုန်းးးးးးး
နို့မို သက်သေမရှိ ဘောလီဘောပုတ်ပွဲကြီးက ပြီးမှာမဟုတ်။
ဒီတစ်ယောက်ကကျ သာမီးတို့ကို ရူးနေတာတဲ့။
ပြောခွင့်ပေးတော့ ပြောလိုက်ကြတာ။ ပြည်သူတွေကို ရစရာမရှိတော့ဘူးးး
ပြောတဲ့စကားကလည်း ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်တုန်း သိရဲ့လား မသိ။
“”ကျွန်တော်တောင် အခုမှ လေ့လာပြီး ပြန်ပြုစုနေရတာ “” တဲ့။ အဟိ
တို့ လူဂျီးတွေ ပြောကာမှ,
မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အားကိုးစရာ တရုတ်အိမ်တွေမှာလိုက်တောင်းစားရမဲ့ သဘောပဲ။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာတွင် အချုပ်အခြာအာဏာ မထိခိုက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး ပြောကြား
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည် ဆိုပါက အချုပ်အခြာအာဏာ မထိခိုက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးက စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် The Hot News Weekly Journal မှ သတင်းထောက် မေးမြန်းခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာမည် ဆိုပါက နိုင်ငံခြား လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိလာပါက တားဆီးနိုင်ရန် စီမံထားရှိပုံအား မေးမြန်းရာ ဦးဌေးဦးက ”ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ထားတာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီး ဖွဲ့ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြင်ဆင်ဖို့ လေ့လာရာမှာလည်း အချုပ်အခြာအာဏာ မထိခိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ တားမြစ်ထားတာကလည်း သူ့တစ်ယောက်တည်းကို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၄၇ နဲ့ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာဆိုရင် လွှတ်တော်အမတ်တောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရာမှာ ကိုယ့်အချုပ်အခြာ အာဏာကို တိုင်းတစ်ပါးက စိုးမိုးနိုင်တယ်လို့ ယူဆရင်တော့ မစဉ်းစားဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
”ပြည်သူတွေ ပြင်ချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကတော့ မယုံကြည်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာတဲ့ ပြည်သူတွေဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင် အခုမှ လေ့လာပြီး ပြန်ပြုစုနေရတာ။ ပြင်ချင်တဲ့သူတွေက ပြည်သူတွေဆီ သွားရှင်းပြပြီး ပြည်သူတွေက ပြင်ချင်တာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်တယ်။ လူတွေက ရူးပြီးဖြစ်နေကြတာပါ” ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အနေဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ လေ့လာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပပြီး စာတမ်းဖတ်ပွဲမှ ရရှိလာသည့် အချက်များပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် အတိုင်းအတာကို ဆက်လက် စဉ်းစားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဌေးဦးက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် ၁၀၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တို့မှလည်း လေ့လာပြုစုလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ နားလည်သိရှိ နိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့ချုပ်အနေနှင့် အသိပညာ ပေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်(အတွဲ၂ အမှတ်(၂၇)ပါ ယခင်တပ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း)ရဲ့သား ထွန်းနိုင်ရွှေအကြောင်း တိုင်ကြားစာ မဟုတ်တဲ့ အမှန်တရားစာ…
ဒီမိုဝေယံသို့ ပေးကပို့လာတဲ့ တိုင်ကြားစာ မဟုတ်တဲ့ အမှန်တရားစာလို့… ဆိုတဲ့
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်တို့ လုပ်ချလိုက်ပုံကတော့ လွန်တယ်။ မယားကြီးနဲ့မကွာ ရသေးတဲ့ ယခင်တပ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း)ရဲ့သား ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ ဇနီးဆိုပြီး သံတော်ဆင့် (စက်တင်ဘာ (၁၄ – ၂၀ -၂ဝ၁၃) မှာ မျက်နှာဖုံး ထိပ်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားတာ ကျန်လူကြီးတွေကို စော်ကားလိုက်တာဘဲ။ မယားကြီးနဲ့ကွာရှင်းထားတာ မလုပ်ရသေးတဲ့ မယားငယ် ပုံကို အောက်က ရဲမေဒေါ်ကြည်ညွှန့်ရဲ့ အထက်မှာ။ နောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် နာမည် ရဲ့အထက်မှာ။ အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ရဲ့ ဘွဲ့အထက်မှာ တင်ပြီး ယတြာချေ ထားတယ်လို့ယူဆ ရပါတယ်..။
ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ သားတစ်ယောက် ကျော်ကျော်နို်င်ရွှေ (ခုစင်ကာပူတွင်ကျောင်းတက် – အသက် ၁၉ နှစ်) နင့် သမီးတစ်ယောက် (ခင်ခင်ဝတီနိုင်ရွှေ – ယခု အသက် ၁၄ နစ် တို့ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
Ne Win plot to rape it’s own infant law. နေဝင်း သူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ မွေးကင်းစ ဥပဒေလေးကို မုဒိန်းကျင့်ရန် ကြံစည်နေပုံ တဲ့။
၁-ယောက် စီကကို ၃ – ၅ ဘီလျံလောက်ချမ်းသာ နေတာ..။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ သြဂုတ်လ အတွင်း အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုပေါင်း ၆၀ကျော် ရှိကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ —
ဘာလူမျိုး ဘာဘာသာဝင်တွေ တုန်းလို့ မေးချင်လိုက်တာ ဂျီးတော်တို့။
လက်နက်ကိုင်တွေ (စစ်/ရဲ/စွမ်းအားရှင်) အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မို့ ဂလောက် လုံခြုံနေပုံပေါ်တယ်နော။ ငိငိငိ။
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2427113/Tunisias-sex-jihadis-sent-Syria-sex-100-rebels-EACH-coming-home-pregnant-children.html#ixzz2fV25zfem
Miss Universe Myanmar 2013 အတွက် မဲပေးကြရအောင်
copy right တဲ့
BURMA RELATED NEWS – SEPTEMBER 20-23, 2013
AP – Luxury river cruise opens up mysteries of Myanmar
AP – Nissan Motor announces production joint venture in Myanmar to begin Sunny production in 2015
AFP – Myanmar peace rally to end ethnic conflicts
AFP – Suu Kyi urges Myanmar diaspora in Singapore to return home
IANS – Quake hits Myanmar
IANS – India, Myanmar working out solution to boundary issue
Bloomberg – Myanmar Needs ‘Responsible Investments’ to Develop, Suu Kyi Says
UPI – Conflict unsettled in Myanmar
International Business Times – Myanmar Sees Huge Foreign Direct Investment (FDI), But American Companies Still Lag Behind
Bernama – Myanmar’s Interests Closely Intertwined With Thailand, Says Country’s Defence Chief
Rappler – In digital age, Myanmar gets to know the newspaper
Asia Times Online – Myanmar admits $7bn in overseas stash
Channel News Asia – More problems if Myanmar constitution not changed by 2015: Suu Kyi
Channel News Asia – Leadership is not about being popular all the time: Aung San Suu Kyi
Channel News Asia – Aung San Suu Kyi meets Singapore leaders
Asia News Network – Myanmar needs reforms: Suu Kyi
Asia One – We have to start with rule of law: Suu Kyi
Asia One – Aung San Suu Kyi exchange views on Myanmar’s development with President Tony Tan
Eastday.com – Myanmar firms seek foreign cooperation in energy development
The New Zealand Herald – Myanmar’s Suu Kyi firm on constitutional change
MENAFN – Myanmar oil & gas firms seek to work with foreign companies Join our daily free Newsletter
Bangkok Post – Dawei speedup deal agreed
The Nation – Editorial: Where is Myanmar’s plan for peace?
Xinhua – Myanmar model to compete in Miss Tourism Queen Int’l in China
The Irrawaddy – Workers End Protest After Reaching Agreement with Factory
The Irrawaddy – Graduate Program Breathes New Life Into Rangoon University
The Irrawaddy – Freedom of Hate Speech
Mizzima News – Myanmar’s Aung San Suu Kyi vows to keep good relations with China
Mizzima News – Attorney advocates independent judiciary
Mizzima News – Speaker to meet with Rakhine organizations
DVB News – Ethnic peace forum concludes with call for nationwide ceasefire
DVB News – Women’s groups call for new constitution
DVB News – Whistleblower welcomes Burma’s nuclear cooperation
BURMA RELATED NEWS – SEPTEMBER 19, 2013
AP – US welcomes Myanmar signing nuclear agreement
Channel NewsAsia – Aung San Suu Kyi to visit Singapore this week
The Nation – Myanmar: Pros and cons of investing in the region’s last frontier market
International Business Times – Myanmar’s Music Industry, After Decades Of Plagiarizing Popular Foreign Artists, Is Beginning To Repent
DhakaTribune – EBA to Myanmar may affect Bangladesh exports to EU
Asia News Network – Myanmar MPs propose to amend laws to block non-citizens from voting
Deutsche Welle – Media International: How free is Myanmar’s press?
THE ASAHI SHIMBUN – At home inaThai garbage dump, Myanmar illegal immigrants earnaliving
Eleven Myanmar – Govt to enter political dialogue only with signing of nationwide ceasefire – MPC
The Irrawaddy – Historic Women’s Forum to Be Held in Burma
The Irrawaddy – Banks Wait for Central Bank to Give Go-Ahead to International Cards
The Irrawaddy – Ministry of Commerce Opens Consumer Affairs Department
Mizzima News – French company opens new office in Myanmar’s Yangon
Mizzima News – Opinion: Dealing with the legacy of the Dark Age
Mizzima News – MP seeks Capital Punishment for rapists
DVB News – Kanbawza Bank is country’s highest taxpayer, says Finance Ministry
DVB News – Thai, Burmese military chiefs conclude talks in Bangkok
Daily News & Analysis-13 minutes ago
Spiritualist and pioneer of the Vipassana meditation in India, S.N. Goenka died late Sunday night due to old age, an aide said here Monday.
ဦးဂိုအင်ကာ သေဘီ… ဒီလိုပေါရတယ် ဒဂျီးရဲ့…. :byee:
Deadline passes for federal government shutdown
အမေရိကားအစိုးရ.. ပိတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း…. :buu:
House to try ‘conference’ approach to funding, but shutdown all but certain
With just over an hour till the midnight deadline ofagovernment shutdown, Senate Majority Leader Harry Reid says that the Senate will not “go to conference until we getaclean CR’.
Government Near Broad Shutdown in Budget ImpasseNew York Times
Midnight Shutdown Nears; Congress Hits Dead EndBusinessweek
Featured:Sen. Hatch expects government shutdown at midnightDeseret News
From Canada:US government on brink of shutdownCTV News
Opinion:Who’s down forashutdown? OpinionlineUSA TODAY
Live Updating:Live: Federal government shutdown loomsCNN (blog)
Related: Republican Party » United States House of Representatives » United States Senate »
အတ်ကိစ္စ ပြောဆိုနေတာ ကနေ့ကြား ဖတ်မိသဗျ..
သို့မဟုတ် ရှင်းထားတဲ့ လင့်ခ် လေးများ ရှယ်ကြပါ နော့ ။
လွယ်လွယ်ပြောရရင်.. အိမ်တအိမ်မှာနေ့စဉ်စားသောက်သုံးကြဖို့.. ဈေးဝယ်ဖို့ ဈေးဖိုးငွေ အိမ်ထောင်ရှင်မက.. မထုတ်မပေးတာဗျ..။
.. ငွေမရှိတော့.. ဘယ်သူမှ ဘာမှမလုပ်နိုင်..။
အာဏာ ပါဝါကို အိမ်ဖြူတော်၊ လွှတ်တော်နဲ့ တရားရေးတို့မျှကိုင်ပြီး.. အပြန်အလှန်ထိမ်းကြရတာ..။ လွှတ်တော်က တိုင်းပြည်သုံးဖို့ဘက်ဂျက်ငွေချပေးတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပါတီတခုထဲ(ဥပမာ ဒီချုပ်) အများစုဆိုရင်.. ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို… စစ်တပ်ကို.. (Shut Down)ပိတ်စို့ရပ်တန့်ခိုင်းလို့ရသဗျ…။
မြန်မာ့ပညာရေးမှာ အကြီးအကျယ် လွဲချော်မှုတခု ဆိုပြီး ဧရာဝတီမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ လင့်ခ်လေး။ သိသင့်တယ်ထင်လို့။